मानिसको प्रत्येक कार्य गुगलको आँखा र नियन्त्रणमा – Sajha Pati
काठमाडौं । लगभग यो २० बर्ष अघिको कुरा थियो । हामी सबैले पहिलो पटक कम्प्युटरको वेब ब्राउजरमा गुगल डट कोम टाइप गरेका थियौं त्यसपछि पृष्ठ लोड भएर, खोज बार र बटन स्क्रीनमा देखा पथ्र्यो । यहाँ तपाईले खोजी टाइप गर्नुपर्नेछ र खोजी बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ भन्ने आउथ्यो । तब त्यहाँ तल लिंकमा सम्बन्धित धेरै परिणामहरू हामीलाई आवश्यक लिंकहरू हुन्थे ।
यो गुगलको युग थियो जब यसले अल्ताभिस्टा, याहू र लाइकोस जस्ता खोज इन्जिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । गुगलले त्यसबेला आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न कोशिस गरिरहेको थियो भन्न सकिन्छ । यद्यपि गुगलले छिटो खोजी जारी राख्यो र अब २० बर्ष पछि गुगलको कहानी पूरै परिवर्तन भएको छ ।
वर्तमानको समयमा खोज इञ्जिनको मुकुट गुगलको टाउकोमा आएको छ र अब प्राय जसो मानिसहरू गुगल नै प्रयोग गर्छन् पनि । लगभग मानिसहरु सबै अथवा अबको जरनेशन पुरै यसको नियन्त्रणमा छन् । गुगलको प्रविधिले सामान्य व्यक्तिको जीवनलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गरेको छ । गुगललाई तपाईंको मनपर्ने र मननपर्ने, सुत्ने, उठाउने, खाने, पिउने र जी–मेल खाताबाट तपाईंको खर्च सम्बन्धित सबै कुरा सुविधा पनि उपलब्ध छ सबै कुरा गुगललाई थाहा छ ।
हामीले बुभ्mनु पर्ने कुरा के छ भने यदि तपाईंसँग एन्ड्रोइड स्मार्टफोन छ भने, जीमेल अनुप्रयोगले यसमा अनुप्रयोगहरू पहुँच गर्न आवश्यक छ । तपाईंको उही खाता आईडी जी–मेल, प्ले स्टोर, यूट्यूब, नक्सा, फोटो, क्यालेन्डर, सम्पर्क जस्ता सबै गुगल अनुप्रयोगहरूमा काम गर्दछ । यो समान आईडीको साथ, गुगलले तपाईंलाई ट्र्याक गर्न सुरू गर्दछ । वास्तवमा, आजकल धेरै प्रविधि कम्पनीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यो एक प्रविधि हो जुन प्रयोगकर्ताको क्रियाकलाप बिभिन्न प्लेटफार्महरूमा ट्र्याक गर्दछ, त्यसपछि उसको मनपर्ने वा मन नपर्नेहरूको डाटा तयार गर्दछ । यसलाई उदाहरण जस्तै मानौं कि एक प्रयोगकर्ताले फोनमा नाम नेम गरीएको छ । जि–मेल डट कम अब ऊ यूट्यूब हेर्छ वा त्यसपछि उसले कुन भिडियो देखे, कति लामो समयसम्म, कुन भिडियो छिटो रोकियो । भिडियो गतिविधि आईडी संग ट्रयाक हुन्छ । अब जब पीसीमा प्रयोगकर्ता नाम एटदरेट जि–मेल साथ लग इन गर्छ तब प्रयोगकर्ताले यूट्यूबमा आफ्नो मनपर्ने भिडियोहरू हेर्न सुरू गर्छ ।
त्यस्तै प्रकारले गुगल म्याप्सको साथ आईडी एटदरेट जि–मेल नामको प्रयोगकर्ता आउँछ र जान्छ, तब गुगलसँग पनि यो डाटाको बारेमा सूचना हुन्छ । उदाहरण को लागी, एक महिनामा प्रयोगकर्ताले कुन होटल भ्रमण गर्नुभयो ? कुन पसल भ्रमण गर्नुभयो ? प्रयोग कर्ताले फिल्म कहाँ देख्यो ? तपाईं कहाँ यात्रा गर्नुभयो ? एआईको सहयोगमा त्यस्ता जानकारी सबै गुगलमा हुन्छ ।
तपाईंले सधैं ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि जब हामी ई–वाणिज्य वेबसाइटमा जान्छौं र कुनै उत्पादन देख्छौं, तब यो अर्को वेबसाइटमा देखा पर्न थाल्छ । यो पनि तपाईंको गतिविधिको एक हिस्सा हो । जब तपाइँ त्यो उत्पादन फेरी बारम्बार देख्नुहुन्छ, तब हुनसक्छ तपाइँले यसलाई किन्न मन लगाउनुभएको छ । मेरो गुगल गतिविधिमा गएर, तपाईं आफ्नो सबै ईतिहास हेर्न सक्नुहुनेछ । त्यो कुन भिडियो तपाईंले हेर्नुभयो, कस्तो समाचार तपाईंले पढ्नुभयो, तपाईंले गुगल खोजी ईन्जिनमा के खोजी गर्नुभयो, कुन अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गरिएका थिए ।
एन्ड्रोइड ओएसको मार्केट सेयर ९५.८५ प्रतिशत छ, आईओएसको मार्केट सेयर ३.२४ छ । प्रायः प्रयोगकर्ताहरूले एन्ड्रोइड स्मार्टफोन मात्र प्रयोग गर्छन् । एन्ड्रोइड ओएस पनि गुगलको उत्पादन हो । यस्तो अवस्थामा गुगलले तपाईंको स्मार्टफोनसँग सम्बन्धित प्रत्येक गतिविधिमा नजर राख्छ । हामीले माथि उल्लेख गरेझैं गुगलका सबै अनुप्रयोगहरू तपाईंको जी–मेल आईडीमा लिंक हुन्छन् ।
तपाईंको फोनको सम्पर्क सूची जी–मेल खातासँग लिंक पनि हो । तपाईको फोनको प्रत्येक सम्पर्क गुगलसँग छ । त्यस्तै, तपाईंको फोनको भिडियोहरू र फोटोहरू पनि गुगलसँग समन्वयन गरिएको छ । गुगलले त्यसलाई क्लाउड भण्डारणमा बचत गर्दछ जस्तै गुगल ड्राइव ।
आजका अधिकांश एन्ड्रोइड प्रयोग कर्ताहरूले गुगल सहायक सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । यो सुविधा भ्वाइस कमाण्ड वा पाठको माध्यमबाट प्रयोग गरिन्छ । आवाजसँग पनि तपाईं केहि खोज्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि तपाईद्वारा दिएका हरेक भ्वाइस कमाण्ड गुगलद्वारा सुरक्षित गरिएको हुन्छ ।
गुगल सहायकलाई आदेश दिएर तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ? र कुन जानकारी तपाईंले गुगललाई सम्झन सोध्नुभयो । यी सबै चीजहरू पनि गुगलमा सुरक्षित हुन्छन् । उदाहरण जस्तै यदि एक प्रयोगकर्ताले गुगल सहायक सुविधा प्रयोग गरिरहेको छ भने सहायकले केहि महत्वपूर्ण चीजहरू सम्झन सक्दछ । वा एक सानो अनुस्मारक पनि रिमाइन्डर गर्ने कुरा गर्न सक्दछ ।
बैंक खातामा पहुँचः विश्वमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले गुगल भुक्तान प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले गुगलको ति धेरै प्रयोगकर्ताहरूको बैंक खातामा पहुँच छ । जब तपाईं गुगल भुक्तानी अनुप्रयोगको साथ कुनै लेनदेन गर्नुहुन्छ, तब यसको विवरणहरू पनि गुगलमा जान्छ । हुनसक्छ गुगल भुक्तान सुरक्षित छ, तर कम्पनीसँग तपाईंको खर्च र बैंक ब्यालेन्सको बारेमा जानकारी छ । यदि तपाईंले एकचोटि आफ्नो क्रेडिट कार्ड बिल, बिजुली बिल, डीटीएच बिल वा गुगल भुक्तानीको साथ कुनै अन्य बिल भुक्तान गर्नुभयो भने गुगलले तपाईंलाई प्रत्येक चोटि सम्झाउनेछ ।
गुगलले भिडियोहरू र संगीत सुन्नका लागि पनि अनुप्रयोगहरू बनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा, एकचोटि तपाईंले यी अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईंलाई आफ्नो मनोरन्जन सम्बन्धित छनौटहरू पनि थाहा हुन्छ । यूट्यूब अब सबैभन्दा ठूलो भिडियो होस्टिंग प्लेटफर्म हो । यसमा, लगभग २१५ मिलियन (लगभग २१.५ करोड) अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरू दैनिक २७ मिनेटको भिडियो हेर्छन् । ई–मार्किट अनुसार, केहि बर्ष पहिले यो आंकडा २२ मिनेट सम्म थियो । गुगलका अनुसार यूट्यूब टिभीमा प्रयोगकर्ताको संख्या गत वर्ष २० लाख भन्दा बढी बढेको छ ।
गुगल कुराकानी वा हैंङ्गआउटको सहयोगमा महत्वपूर्ण कामहरू गर्छन् । गुगलमा तपाईको कुराकानी सदाको लागि सुरक्षित गर्छ । यदि तपाईंको तर्फबाट मेटाउनुहुन्छ, भने अन्य प्रयोगकर्ताहरूले यी बचत गरेको हुन सक्छ । यदि दुबै प्रयोगकर्ताले च्याट मेटाए भने पनि च्याटहरू अझै गुगल मार्फत सुरक्षित हुन्छन् ।
गुगलले अनलाइनसीट दिएर माईक्रोसफ्ट अफिसको काम समाप्त गरीसकेको छ । तपाइँले अनलाइन पेजमा गर्नुहुने कुनै पनि कार्य क्वाड भण्डारणमा सुरक्षित गरिन्छ । जस पछि तपाईं गुगल पेज कुनै पनि समय र कहीं पनि खोल्न सक्नुहुन्छ । त्यसको मतलब हो, तपाईंले पेजमा गरिएका सबै कामहरूको बारेमा जानकारी गुगललाई प्रत्यक्ष तरिकामा दिनु भएको छ । गुगल मीटको मद्दतले तपाईं धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं भिडियो कलमा चाहानुहुन्छ, तर तपाईंले गर्नुहुने सबै गुगलमा रहन्छ ।
गुगल प्ले स्टोर मा १३५ गुगल अनुप्रयोग छन् । यी मध्ये ५० अनुप्रयोगहरूले धेरै प्रयोग गरिरहेका छन् । अधिकतर अनुप्रयोगहरू गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिंग प्रणालीको अंश हुन् । एकै साथ धेरै अनुप्रयोगहरू फोनले उनीहरूको आवश्यकता अनुसार फोन स्थापना गर्दछन् । किनकि गुगलसँग तपाईंको छनोटसँग सम्बन्धित प्रत्येक विवरण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उसले तपाईको मनपर्दो सामग्री देखाउँदछ, तर ऊसँग त्यस्तो नियन्त्रण छ कि उसले तपाईलाई केहि पनि थोप्न सक्छ ।-विभिन्न साईटबाट अनुवादित
अमेरीका जस्तो विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा पनि लिङ्ग भेद